चीन खरगोश हच पिंजरा निर्माता र आपूर्तिकर्ता - JTL धातु
घर > उत्पादनहरु > खरगोश हच केज
Ningbo Haishu Yinjiang Jintangli धातु उत्पादनहरु कारखाना एक पेशेवर निर्माता र चीन मा पालतू पशुहरु को मेज र कुकुर बक्से को आपूर्तिकर्ता हो। हामी पाल्तु जनावर उत्पादनहरु, स्टेनलेस स्टील उत्पादनहरु र अन्य धातु उत्पादनहरु को उत्पादन मा विशेषज्ञता। हामीले जनावरहरु संग मानिसहरु लाई अक्सर एक स्वास्थ्य साथी को सकारात्मक प्रभाव को कारण स्वास्थ्य र जीवन को एक राम्रो गुण को आनन्द लिईयो। तेसैले हामी घरपालुवा घरहरु को प्रयास गर्न थाल्छौं। पहिलो विकसित खरगोश हच पिंजरा पागलपन ग्राहकहरु द्वारा स्वागत गरीन्छ। तब weâ â the अर्को २० बर्ष को लागी साना जनावरहरु को लागी बिभिन्न व्यावसायिक डिजाइन घर उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको छ।
घरपालुवा जनावर प्रेमीहरु द्वारा शुरू, खरगोश हच पिंजरा हामी उच्चतम गुणवत्ता र सबैभन्दा नवीन विचारहरु संग उत्पादनहरु प्रदान गर्दछ। यो तपाइँको खरगोश, बनी, गिनी सुँगुर, चिकन वा फेरेट को लागी एक उत्तम घर हो। उनीहरुलाई सुखी सुरक्षित र स्वस्थ जीवन दिनुहोस्।
डिलक्स ठूलो खरगोश हच पिंजरा यो तपाइँको प्यारा घरपालुवा जनावरहरु को लागी एक आरामदायक घेरा बाट एक बाहिरी संरक्षित घरपछाडि को सहज गर्न को लागी सम्भव बनाउँछ। निर्धारित हच, पनरोक छत, भारी शुल्क काठ र जाल तपाइँको कुखुरा को लागी एक सुरक्षित र आरामदायक वातावरण प्रदान गर्दछ। पिंजरा मा विन्डो प्रकाश मा अनुमति दिन्छ र सौर्य संग्रह र ताजा हावा संचलन मा मद्दत गर्दछ।
57 '' काठको पाल्तु जनावर चिकन खरगोश हच पिंजरा भित्री आउटडोर
हाम्रा साना जनावर साथीहरु लाई घर कल गर्न को लागी एक ठाउँ भएको जस्तै माया गर्छौं। यही कारणले गर्दा हामी यो भयानक खरगोश हच पिंजरा मात्र उनीहरुको लागि डिजाइन गरीयो!
यो ५ '' 'JTL बाट काठ घरपालुवा जनावर चिकन खरगोश हच पिंजरा इनडोर आउटडोर खरगोश, गिनी सुँगुर, र अन्य समान आकार जनावरहरु संग प्रयोग को लागी आदर्श छ। यो डिलक्स काठ को खरगोश हच सुरक्षा र तपाइँको प्यारो साथीहरु को लागी स्वतन्त्रता को एक सही मिश्रण हो र घर को सबै आराम प्रदान गर्दछ। एक आरामदायक, घर शैली भित्री ठाउँ र विशाल रन क्षेत्र तपाइँको पाल्तु जनावर को लागी पर्याप्त ठाउँ प्रदान गर्दछ। माथिल्लो क्षेत्र गोपनीयता र आराम को लागी डिजाइन गरीएको छ जबकि तल्लो क्षेत्र रन र खेल को लागी अधिक ठाउँ प्रदान गर्दछ। एक आन्तरिक र्‍याम्प दुई बीच छिटो पहुँच प्रदान गर्दछ। Lockable ढोका र स्लाइड बाहिर ट्रे सफाई, खुवाउन र अन्य नियमित कार्यहरु को लागी सजीलो पहुँच प्रदान गर्दछ। प्राकृतिक देवदार काठ को बनेको छ जो पानी आधारित रंग र झुकाव डामर छत संग लेपित मौसम तत्वहरु को बिरूद्ध मा शामिल छ। तपाइँको प्यारो साथी JTL बाट एक आरामदायक बस्ने ठाउँ दिनुहोस्!
57 '' काठको पाल्तु जनावर चिकन खरगोश हच केज
हाम्रा साना जनावर साथीहरु लाई घर कल गर्न को लागी एक ठाउँ भएको जस्तै माया गर्छौं। यही कारणले गर्दा हामी यो भयानक खरगोश हच पिंजरा मात्र उनीहरुको लागि डिजाइन गरीयो! डिलक्स ठूलो पिंजरा यो तपाइँको प्यारा घरपालुवा जनावरहरु को लागी एक आरामदायक घेरा बाट एक बाहिरी संरक्षित घरपछाडि निर्बाध सार्न सम्भव बनाउँछ। निर्धारित हच, पनरोक छत, भारी शुल्क काठ र जाल तपाइँको कुखुरा को लागी एक सुरक्षित र आरामदायक वातावरण प्रदान गर्दछ। पिंजरा मा विन्डो प्रकाश मा अनुमति दिन्छ र सौर्य संग्रह र ताजा हावा संचलन मा मद्दत गर्दछ।
हामीले जनावरहरु संग मानिसहरु लाई अक्सर एक स्वास्थ्य साथी को सकारात्मक प्रभाव को कारण स्वास्थ्य र जीवन को एक राम्रो गुण को आनन्द लिईयो। तेसैले हामी घरपालुवा घरहरु को प्रयास गर्न थाल्छौं। पहिलो विकसित ५ 57 '' काठ पालतू चिकन खरगोश हच पिंजरा पागलपन ग्राहकहरु द्वारा स्वागत छ। तब weâ â the अर्को २० बर्ष को लागी साना जनावरहरु को लागी बिभिन्न व्यावसायिक डिजाइन घर उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको छ। घरपालुवा जनावर मालिकहरु र घरपालुवा जनावरहरु को निर्माता को रूप मा, हामी सबै बिभिन्न किस्महरु र घरपालुवा जनावरहरु को आवश्यकताहरु को आकार को ख्याल राख्ने जिम्मेवारी छ तपाइँको घरपालुवा जनावरको मुटु तातो गर्न को लागी।
57 '' हटाने योग्य ट्रे संग काठ को बाहिरी खरगोश हच पिंजरा
हाम्रा साना जनावर साथीहरु लाई घर कल गर्न को लागी एक ठाउँ भएको धेरै माया गर्छौं। यही कारणले गर्दा हामी यो भयानक खरगोश हच पिंजरा मात्र उनीहरुको लागि डिजाइन गरीयो!
यो ५ '' 'JTL बाट हटाउन योग्य ट्रे संग काठ को बाहिरी खरगोश हच पिंजरा खरगोश, गिनी सुँगुर, र अन्य समान आकार को जनावरहरु संग प्रयोग को लागी आदर्श हो। यो डिलक्स काठ को खरगोश हच सुरक्षा र तपाइँको प्यारो साथीहरु को लागी स्वतन्त्रता को एक सही मिश्रण हो र घर को सबै आराम प्रदान गर्दछ। एक आरामदायक, घर शैली भित्री ठाउँ र विशाल रन क्षेत्र तपाइँको पाल्तु जनावर को लागी पर्याप्त ठाउँ प्रदान गर्दछ। माथिल्लो क्षेत्र गोपनीयता र आराम को लागी डिजाइन गरीएको छ जबकि तल्लो क्षेत्र रन र खेल को लागी अधिक ठाउँ प्रदान गर्दछ। एक आन्तरिक र्‍याम्प दुई बीच छिटो पहुँच प्रदान गर्दछ। Lockable ढोका र स्लाइड बाहिर ट्रे सफाई, खुवाउन र अन्य नियमित कार्यहरु को लागी सजीलो पहुँच प्रदान गर्दछ। प्राकृतिक देवदार काठ को बनेको छ जो पानी आधारित रंग र झुकाव डामर छत संग लेपित मौसम तत्वहरु को बिरूद्ध मा शामिल छ। तपाइँको प्यारो साथी JTL बाट एक आरामदायक बस्ने ठाउँ दिनुहोस्!
57 '' काठको बाहिरी खरगोश हच केज
यो ५ '' 'JTL बाट काठ आउटडोर खरगोश हच पिंजरा खरगोश, गिनी सुँगुर, र अन्य समान आकार को जनावरहरु संग प्रयोग को लागी आदर्श छ। यो डिलक्स काठ को खरगोश हच सुरक्षा र तपाइँको प्यारो साथीहरु को लागी स्वतन्त्रता को एक सही मिश्रण हो र घर को सबै आराम प्रदान गर्दछ। एक आरामदायक, घर शैली भित्री ठाउँ र विशाल रन क्षेत्र तपाइँको पाल्तु जनावर को लागी पर्याप्त ठाउँ प्रदान गर्दछ। माथिल्लो क्षेत्र गोपनीयता र आराम को लागी डिजाइन गरीएको छ जबकि तल्लो क्षेत्र रन र खेल को लागी अधिक ठाउँ प्रदान गर्दछ। एक आन्तरिक र्‍याम्प दुई बीच छिटो पहुँच प्रदान गर्दछ। Lockable ढोका र स्लाइड बाहिर ट्रे सफाई, खुवाउन र अन्य नियमित कार्यहरु को लागी सजीलो पहुँच प्रदान गर्दछ। प्राकृतिक देवदार काठ को बनेको छ जो पानी आधारित रंग र झुकाव डामर छत संग लेपित मौसम तत्वहरु को बिरूद्ध मा शामिल छ। तपाइँको प्यारो साथी JTL बाट एक आरामदायक बस्ने ठाउँ दिनुहोस्!
57 '' स्टेनलेस स्टील latches संग काठ इनडोर खरगोश हच पिंजरा
हामीले जनावरहरु संग मानिसहरु लाई अक्सर एक स्वास्थ्य साथी को सकारात्मक प्रभाव को कारण स्वास्थ्य र जीवन को एक राम्रो गुण को आनन्द लिईयो। तेसैले हामी घरपालुवा घरहरु को प्रयास गर्न थाल्छौं। पहिलो विकसित ५ 57 '' स्टेनलेस स्टील latches संग काठ इनडोर खरगोश हच पिंजरा पागलपन ग्राहकहरु द्वारा स्वागत छ। तब weâ â the अर्को २० बर्ष को लागी साना जनावरहरु को लागी बिभिन्न व्यावसायिक डिजाइन घर उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको छ। घरपालुवा जनावर मालिकहरु र घरपालुवा जनावरहरु को निर्माता को रूप मा, हामी सबै बिभिन्न किस्महरु र घरपालुवा जनावरहरु को आवश्यकताहरु को आकार को ख्याल राख्ने जिम्मेवारी छ तपाइँको घरपालुवा जनावरको मुटु तातो गर्न को लागी।
57 "काठ इनडोर खरगोश हच पिंजरा
हामीले जनावरहरु संग मानिसहरु लाई अक्सर एक स्वास्थ्य साथी को सकारात्मक प्रभाव को कारण स्वास्थ्य र जीवन को एक राम्रो गुण को आनन्द लिईयो। तेसैले हामी घरपालुवा घरहरु को प्रयास गर्न थाल्छौं। पहिलो विकसित ५ 57 '' काठ इनडोर खरगोश हच पिंजरा पागलपन ग्राहकहरु द्वारा स्वागत छ। तब weâ â the अर्को २० बर्ष को लागी साना जनावरहरु को लागी बिभिन्न व्यावसायिक डिजाइन घर उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध रहेको छ। घरपालुवा जनावर मालिकहरु र घरपालुवा जनावरहरु को निर्माता को रूप मा, हामी सबै बिभिन्न किस्महरु र घरपालुवा जनावरहरु को आवश्यकताहरु को आकार को ख्याल राख्ने जिम्मेवारी छ तपाइँको घरपालुवा जनावरको मुटु तातो गर्न को लागी।
एक पेशेवर चीन खरगोश हच केज निर्माताहरु र आपूर्तिकर्ताहरु को रूप मा, यदि म थोक गर्न चाहन्छु, तपाइँ मलाई के मूल्य दिनुहुन्छ? यदि तपाइँको थोक मात्रा ठूलो छ, हामी कारखाना price.You प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ भर्खरको बिक्री र हामी बाट चीन मा बनेको उच्च गुणस्तरीय उत्पादनहरु लाई आश्वस्त आराम गर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य! हाम्रो उद्धरण कम छ। छुट किन्नको लागी स्वागत छ खरगोश हच केज। अधिक जानकारी को लागी, अब हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।